MAQAL & MUUQAAL: Taageerayaal boqollaal ah oo ku qamaamay guriga Maxamed Saalax & booliiska oo arrintii soo farageliyay! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha MAQAL & MUUQAAL: Taageerayaal boqollaal ah oo ku qamaamay guriga Maxamed Saalax...
MAQAL & MUUQAAL: Taageerayaal boqollaal ah oo ku qamaamay guriga Maxamed Saalax & booliiska oo arrintii soo farageliyay!
(Qaahira) 29 Juun 2018 – Jookarka kubadda cagta Masar, Mohamed Salah, ayaa akhyaarnimo muujiyay kaddib markii ay gurigiisa kusoo qamaameen taageerayaal Masaari ah oo baraha bulshada kasoo helay cinwaanka gurigiisa.
Laacibka oo aan wax caro iyo xumaan ah muujinin, ayaa dibedda usoo baxay isagoo waraaqo u saxiixay taageerayaasha isla markaana sawirro la galay boqollaal taageerayaal ah oo dhoobnaa daaradda gurigiisa.
Sida lagu helay cinwaanka guriga 26-jirkan ayaa lagu qiyaasay inuu taageere ku arkay masjid ku yaalla xaafadda uu joogo, kaasoo deeto daba dhigtay oo soo hubiyay gurigiisa, kaddibna baraha bulshada ku faafiyay cinwaankiisa.
— shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) 29 juni 2018
Salah ayaa todobaadkan dib ugu laabtay dalka Masar kaddib bandhig xumadii xulkiisa ee KA2018, oo gebi ahaanba xulkiisa laga wada adkaaday 3-dii kulan ee heerka guruubka A, iyadoo sida la sheegayo uu booliiska oo goobta yimid uu dadkii kala dareeriyay, si loo badbaadiyo laacibka iyo qoyskiisa.
Previous articleDAAWO: Midowga Yurub oo isku raacay arrin aysan jeclaysan doonin qaxootigu (Waa maxay?)
Next articleDHEGEYSO: ”Itoobiya uma ogolin inay shidaalkeenna dadyow kale ku quudiso” – ONLF oo sheegtay inay diiddan yihiin shidaalka laso saaray